Fitaterana an’habakabaka : “Ho fanoitry ny fampandrosoana” -
AccueilSongandinaFitaterana an’habakabaka : “Ho fanoitry ny fampandrosoana”
Fitaterana an’habakabaka : “Ho fanoitry ny fampandrosoana”
31/07/2017 admintriatra Songandina 0
Nifarana omaly ny fivoriambe iraisam-pirenen’ny « Agence pour la Securité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar » na ny ASECNA, izay tao anatin’ny andiany faha-135. Niaraka tamin’izay ihany koa moa ny fivoriamben’ny komitin’ny Minisitra misahana ny fitaterana an’habakabaka, andiany faha-61. Araka ny efa fantatra moa dia nifarana tamin’ny volana janoary lasa teo ny fe-potoana niasan’ny Komitin’ny Minisitra misahana ny fitaterana an’habakabaka, ka ho fanatsarana ny asa manaraka dia nisy ny tatitra nataon’ny Tale teo aloha, Edgard Alain Mebe N’go, ka nanehoany ny tomban’asa rehetra vita nandritra ny fotoana niasany. Nibahan-toerana tao anatin’izany tomban’asa izany ny lafiny fanamafisana ny fiarovana eo anivon’ny fifamoivoizana an’habakabaka, ny fampiasam-bola nataon’ny ASECNA entina hanatsarana ny asa anatiny.
“ Tsy nitsahatra nitady izay fomba entina hampandrosoana ny fitaterana an’habakabaka, sy nampandeha ny asa araka ny fenitra takian’ny Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), ary ny fanavaozana ireo fitaovana ampiasaina, izay iarahan’ny firenena miasa amin’ny ASECNA i Madagasikara. Mbola hitohy hatrany anefa izany, ka ny tanjona dia ny fanaovana ny fitaterana an’habakabaka ho iray amin’ireo fanoitry ny fampandrosoana ny firenena. Mbola hitohy hatrany moa ny fampiakarana ny lentan’ireo fitaovana rehetra ampiasaina”, araka ny fanazavana nentin’ny Praiministra Mahafaly Olivier Solonandrasana. Maro ireo tohana sy fanampiana izay efa natolotry ny ASECNA. Tao ny fanofanana ireo tanora ao amin’ny sekoliny, ireo izay ao amin’ny sampana misahana ny famantarana ny toetr’andro, ary ireo tompon’andraikitra mpanara-maso ny filaminana. Etsy andanin’izay ny fandraisan’ anjarany amin’ny fiarovana ny sosona ôzôna, izay olana maneran-tany tokoa. Marihina etoana fa i Madagasikara no manana “Région d’Information de Vol” na FIR lehibe indrindra. Araka ny fanazavana voaray tokoa mantsy dia nahitana fiaingana sy fahatongavan’ny sidina miisa 32.000 sy fivezivezena an’habakabaka miisa 23.000 ny FIR ho an’Antananarivo, ny taona 2015.
Karaman’ny mpiasam-panjakana:NIAKATRA FITO ISAN-JATO
Nahazo ny anjarany ny mpanao politika mpanohitra omaly nandritra ny fifampiarahabana ara-diplomatika sy ny andrim-panjakana teny Iavoloha. Nanao tsindrom-paingotra ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, mba hahatonga saina ny mpanohitra satria « betsaka ny fandrabirabiana, fanakiviana, fandemena ny ...Tohiny
Filoha teny Antanimbarinandriana : « Aoka izay ny adihevitra tsy mampandroso »